OMG Virtual Buddy System - Man Down System - Lone Worker Were n'Ọrụ Nchedo Nchebe | Singapore Top Mini GPS Tracker nke Autism / Autistic Kids & Dementia Okenye
OMG Virtual Buddy System - Man Down System - Lone Worker Were n'Ọrụ Ngwọta Nchedo
Ntughari, njem na ọkpụkpụ na-anọgide na-akpata nnukwu ihe kpatara mberede ebe ọrụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ. Ma ọdịda site n'ịdị elu ma ọ bụ nbibi na wiwi na ihe ize ndụ ndị ọzọ, dara nwere ike ịkpata mmerụ dị njọ na ọbụna ọnwu nye ndị ọrụ gị. Ịmara mgbe ọdịda ga-eme na iziga enyemaka ahụike ozugbo nwere ike ịbụ ihe dị iche n'etiti obere mmerụ na mgbanwe ndụ. Ma gịnị ma ọ bụrụ na ndị ọrụ gị na-arụ ọrụ naanị maọbụ na ha adịghị ahụ anya na ụda? Kedu ka ha ga esi bulie mkpu ma ọ bụrụ na ha merụrụ ahụ? Mmadụ na-ada ụda na ngwaọrụ na-aghọwanye ngwọta na-ewu ewu maka ọnọdụ dị otú ahụ.
iHelp 2.0 Ọrụ GPS Tracker Device nwere ike nyochaa oge nke onye ọrụ, mgbe enwere ọdịda, iHelp 2.0 nwere ike ịmalite ịmụrụ anya na ekwentị onye ọzọ, ka a wee nwee ike inye aka ozugbo.
Onye ọrụ nwere ike ịkpọ ma ọ bụ zipu ozi na ọkwa ọhụụ ma ọ bụrụ na ihe mberede na onye nlekọta ozugbo.
Maka ndị ọrụ na-arụ ọrụ n'akụkụ ndị kasị dị ize ndụ dị ka iwu ụlọ, akụ ala, nlekọta ahụ ike, mmanye ma ọ bụ njem, Aware 360 na-enye ndị ọrụ ọrụ nchekwa zuru ezu iji hụ na onye ọrụ ọ bụla nwere ike ịnweta enyemaka ma ọ bụ enyemaka ahụike mgbe ọ dị mkpa. N'iji satalait (GPS) ngwaọrụ, ngwa ngwa na wearables anyị hụ na a na-etinye teknụzụ dị mma maka ọnọdụ ọ bụla pụrụ iche.
iHelp - Man Down System - Nchekwa ọrụ nchedo Ngwọta
8. Na batrị Lithium 900 mah Lithium na-agbanye ọkụ. Oge njikere: 10 ụbọchị.
Nzuzo 5860 20 Echiche Taa
iHelp 1.0 - 3G / 4G GSP Ndepụta Keychain, Waterproof…
iHelp 2.0 - 3G / 4G GPS Ndepụta Keychain, Waterproof…